Ny tany midadasika eropeanina dia ny loharano angano sy angano fotsiny, mahatalanjona ny endriky ny, sy vohitra izay mitana ny tsiambaratelo taloha. Manakaiky ny tanàna afovoany cosmopolitan na mitodika any ambadiky ny tendrombohitra vatolampy, tsy hita isa ny isan'ireo vohitra mahafinaritra sy mahaliana any Eropa. Na izany aza, misy 10 tanàna mahafinaritra any Eropa izay ny hatsaran-tarehy sy ny majika dia mihoatra ny olon-drehetra.
Ny trano fotsy dia voaravaka sary hoso-doko soratra taloha antsoina hoe sgraffiti. Romansh, ilay fiteny an-toerana, tafavoaka ary mbola miteny mandraka androany.
Ilay tanàna mandry amoron'ny reniranon'i Moselle. Trano vita an-tsoavaly sy trano fisaka mahafinaritra eny amoron-dalambe tery. Tsara amin'ny fararano, rehefa mitafy akanjo volamena ny ahi-maitso sy hazo, manampy amin'ny toerana mahafinaritra sy mahafinaritra ny Cochem tsara tarehy.
St. Ny anaran'ny tanàna Genies dia manome antsika 10 Tanàna mahafinaritra ao Eropa noho ny trano vato misy havoana. Ankoatry ny, ny fiangonana tamin'ny taonjato faha-12 sy ny lapa tamin'ny taonjato faha-13 dia eo afovoan'ny tanàna. Ny làlambe iray miolakolaka dia hamakivaky ny tanàna sy ireo trano vato miloko mainty mankany amin'ny fomba fijery sy toerana mahavariana indrindra.
Manome torohevitra tokoa izy hiakatra eo amin'ny lapan'ny Cesky Krumlov ho an'ny sary tsy hay hadinoina nataon'i Cesky Krumlov, ny reniranon'i Vltava, ary natiora mahafinaritra manodidina ny faritra Bohemia.
Ianao ve te-hametraka ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginay “10 Tanànan'ny Scenic any Eropa"Eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-villages-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)